छोरीको हत्या गर्न १ लाख ५० हजार ‘सुपारी’, आमाबाबुको योजना विफल भएपछि फेरि १ लाख! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/छोरीको हत्या गर्न १ लाख ५० हजार ‘सुपारी’, आमाबाबुको योजना विफल भएपछि फेरि १ लाख!
रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–७ की १७ वर्षीया युवतीको गोली हानी हत्या भएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। लौकाहाका स्थानीय रामअयोध्या साहकी छोरी अमृताकुमारीको हत्यामा उनकै आमाबाबुसहित ७ जना पक्राउ परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।
हत्या भएकी अमृताका बाबु रामअयोध्या साहतेली, आमा सीतादेवीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। हत्याका अर्का योजनाकार एवं रामअयोध्याका अर्का ज्वाइँ लक्ष्मण साह फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिएका हुन्।
सुपारी लिएर अमृताको हत्या गर्ने देवाही गोनाही नगरपालिका–२ करुनिया लक्षमिनियाँका ६० वर्षीय शेख अलियास, सोही ठाउँका ४० वर्षीय बहुदल भनिने इस्लाम अन्सारी, ३५ वर्षीय शेख इन्ताज, ५० वर्षका कैमुल देवान र परोहा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय छोटेलाल साहलाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ।
जिल्ला अदालत रौतहटले हत्याको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि ७ दिन म्याद थप गरेको छ। प्रहरी उपरीक्षक शाहका अनुसार एक अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ।
‘अनुसन्धान भइरहेको छ, छोरीको हत्या गर्न शुरुमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको खुलेको छ, तर आमाबाबुको पहिलो योजना विफल भएपछि फेरि १ लाख रुपैयाँ दिएर छोरीको हत्या गराएको अभियुक्तहरूले स्वीकारेका छन्,’ शाहले नेपाली पब्लिकसँग भने।
आरोपी सबैले घटना स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ। अभियुक्तहरूमाथि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ।
अमृता केही महिना सर्लाही विशुनपुरमा रहेपछि उनका श्रीमान् रुपेशमाथि धारिलो हतियारले आक्रमण भएको थियो। उक्त घटनामा रुपेशका परिवारले अमृता र उनका प्रेमी सोसिन्द्रमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
घटनापछि अमृता माइतीघर लौकाहामै बस्दै आएकी थिइन्। गत असारमा रुपेशसँग सम्बन्धविच्छेद भएको थियो। माइती बसेकी छोरी अमृता प्रेमी सोसिन्द्रसँग भागेमा समाजमा ‘हाम्रो इज्जत जान्छ’ भनेर उनका बाबुआमाले छोरीलाई घरमै रोकेका थिए।
तर, छोरीलाई घरमै रोकेर राखे पनि उनीहरूको बेचैनी झन् बढ्यो। प्रेमीसँग छोरी भाग्ने आशंकाले उनीहरूले अमृताको हत्याको योजना बनाए। र, उपचारको बहाना बनाएर भारतमा लगे।
परोहाका छोटेलाल साहलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर हत्या गराउने रामअयोध्या र उनका अर्का ज्वाइँ देवाही गोनाही–२ करुनियाका लक्ष्मण साहले मिलेर योजना बनाएका थिए।
रामअयोध्या र ज्वाइँ लक्ष्मणले इज्जतका लागि भनेर देवाही गोनाही–२ का कैमुल देवानलाई अमृताको हत्या गर्न एक लाख रुपैयाँको सुपारी दिएको प्रहरी उपरीक्षक शाहले जानकारी दिए।
मुख्य योजनाकार कैमुलले अन्य अभियुक्तसँग मिलेर गत कात्तिक २६ गते राति आमासँग आफ्नो घरमै सुतिरहेका बेला हत्या गरेका थिए।
आमा उठेर शौचालय जाँदा राति साढे ११ बजे अमृताको कञ्चटमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। घटनापछि मृतकका श्रीमान्, प्रेमी र परिवारका सदस्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अपराधी पक्राउ तथा हत्याको योजना बाहिर आएको प्रहरी उपरीक्षक शाहले बताएका छन्।
अन्य ६ जना आरोपी यसअघि नै पक्राउ परे पनि मुख्य योजनाकार कैमुल सर्लाही मलङ्गवामा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा आइतबार पक्राउ परेको प्रहरी उपरीक्षक शाहले बताएका छन्।